Litecoin Archives-Funda ukurhweba
I-Litecoin (i-LTC) ifikelela kwiNgingqi ye-Oversold, Ibambe ngaphezu kwe-$ 126 yenkxaso
ixabiso LTC retests $126 inkxaso
I-Litecoin ifikelela kwindawo ethengiswa kakhulu
I-Litecoin (LTC) Izibalo zangoku
Ixabiso langoku: $ 131.48
Intengo yeNtengiso: $ 11,044,176,016
Umthamo wokuThengisa: $ 827,199,880
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 200, $ 220, $ 240
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 100, $ 80, $ 60
Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoJanuwari 11, 2022
I-Litecoin's (LTC) ixabiso liwile ukuya ezantsi $120 njengoko ubambe ngaphezu $126 inkxaso. I-cryptocurrency ithengisa nge-131 yeedola ngexesha lokushicilela. NgoDisemba 4 ukuhla kwexabiso, i-Litecoin yawela kwi-$ 126 ephantsi kodwa yenza ukulungiswa okuphezulu. Ukulungiswa okuphezulu kupheliswe kwindawo ephezulu ye-165 yeedola. Oku kubangele ukuba i-crypto iqalise ukuthengisa uxinzelelo. Namhlanje, iibhere ziphinda zivavanye inkxaso yangoku ukuze ziphule ngaphantsi kwayo. I-crypto iya kuphinda iqalise ukuhamba ukuba inkxaso yangoku ibambe. Ngakolunye uhlangothi, i-LTC / USD iya kuhla ukuya kwi-$ 104 ukuba inkxaso yangoku iphulwa.
I-crypto ikwinqanaba le-32 yexesha le-Relative Strength Index 14. I-Litecoin ngoku ikwindawo ethengiswa kakhulu kwiimarike. Uxinzelelo lokuthengisa lufikelele ekuphelelweni kwe-bearish. Imivalo yexabiso ye-LTC ingaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Ukuya phezulu kuya kuphinda kuqalise xa amaxabiso engaphezulu kwemiyinge ehambayo. I-Litecoin nayo ingaphantsi kwe-20% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla
I-LTC / i-USD isendleleni ephantsi kwaye ifikelele kummandla ogqithisiweyo weemarike njengoko ibamba ngaphezu kwe-$ 126 inkxaso .. Okwangoku, ngo-Disemba 16, umzimba wekhandlela obuyiselweyo wavavanya i-78.6% ye-Fibonacci yokubuyisela inqanaba. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Litecoin iya kuwa kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 117.96.
I-Litecoin (LTC) iyaguquguquka phakathi kwe-144 yeedola kunye ne-155 yeedola njengoko abathengi beRecoup ukuphinda baqalise i-Uptrend
Ixabiso le-LTC liphinda liqalise ukulungiswa
I-Litecoin iyatshintsha phakathi kwe- $ 144 kunye ne- $ 155
Ixabiso langoku: $ 148.18
Intengo yeNtengiso: $ 12,451,441,024
Umthamo wokuThengisa: $ 12,451,441,024
Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoJanuwari 5, 2022
I-Litecoin's (LTC) ixabiso lisekwisilungiso esihlayo njengoko abathengi bephinda bephinda baqalise ukunyusa. Ukusukela nge-28 kaDisemba, i-cryptocurrency yawela kwindawo edibeneyo yoluhlu emazantsi etshathi. NgoDisemba i-23 uptrend, i-altcoin yalungisa phezulu kodwa yachithwa kwinqanaba lokumelana ne-$ 165. Ngenxa yoko, i-LTC/USD yawela ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Namhlanje, i-Litecoin idibanisa ngaphezu kwe-$ 144 inkxaso kodwa ingaphantsi kwe-$ 155 yokuxhathisa. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba iinkunzi zenkomo ziqhekeza ngaphezu kwee-avareji ezihambayo okanye i-$ 165high.
Ixabiso le-LTC lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuwa okunokwenzeka kwe-cryptocurrency. I-crypto iye yawa kwinqanaba le-41 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Imarike ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isantya se-bullish asizinzile njengoko ixabiso liguquguquka.
I-Litecoin ikuluhlu olubophelelekile ezantsi kwetshathi njengoko abathengi bebuyisela ukuqalisa kwakhona i-uptrend. Isenzo sexabiso sibonakaliswa ngamakhandlela amancinci omzimba abizwa ngokuba yiDoji kunye ne-Spinning top. Amakhandlela anoxanduva lokuhamba ngoku kuluhlu. Amakhandlela abonisa ukuba abathengi kunye nabathengisi abaqinisekanga malunga nolwalathiso lwemarike.
I-Litecoin (i-LTC) iphinda ibuyele yangaphambili ePhantsi njengabathengi bahlanganisana ngaphezu kwe-$ 140 yenkxaso
Ukuwohloka kwe-LTC ukuya ezantsi kwi-142 yeedola
I-Litecoin iphinda iqalise ukuguquguquka phakathi kwe-$ 140 kunye ne-$ 160
Ixabiso langoku: $ 148.20
Intengo yeNtengiso: $ 12,445,775,671
Umthamo wokuThengisa: $ 1,095,304,686
imimandla yonikezelo Major: $200, $220, $240n the
I-Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso nge-28 Disemba 2021
Litecoin (LTC) ixabisoe yenza ukuhla okutsha emva kokubetha phezulu kwe-$ 165 njengoko abathengi bahlanganisana ngaphezu kwenkxaso ye-140 yeedola. Ixabiso le-crypto liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuhla okungaphezulu ukuya ngaphantsi. I-Litecoin iwele kwi-low yangaphambili kwi-142 yeedola. I-cryptocurrency kusenokwenzeka ukuba iqalise ukuguquguquka kuluhlu lwangaphambili lwendawo ebikelwe i-$140 kunye ne-160 yeedola. Inkxaso ekhoyo ibambe ukusukela ngoSeptemba. I-uptrend inokuphinda iqalise ukuba inkxaso yangoku ibambe. Kwi-downside, ukuba iibhere ziphule ngaphantsi kwenkxaso ye-140 yeedola, imarike iya kuncipha ukuya kwi-126 yeedola. Inkxaso ye-126 ye-$ yi-low yangaphambili ye-4 ye-December yokuhla kwexabiso.
I-Litecoin ikwinqanaba le-39 le-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-cryptocurrency ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. I-altcoin ibambe ngaphezu kwenkxaso ebalulekileyo ebambe. Ixabiso le-crypto ngoku lingaphantsi kwe-avareji yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ezihambayo ezibonisa ukunyuka okuhla. I-Litecoin ingaphezulu kwe-25% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi iphinde yaqala ukusebenza ngokunyukayo.
I-Litecoin isilungiso esisezantsi njengoko abathengi bahlanganisana ngaphezu kwe-140 yenkxaso ye-$. . I-altcoin iya kufezekisa isantya esiphezulu ukuba iphinda ibuyele ngaphezu kwenkxaso yangoku. Okwangoku, ngoNovemba 26 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-LTC liya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 143.35.
I-Litecoin (LTC) iQhubekeka ngokuHlanganisa ngaphezu kwe-142 yeedola, i-Uptrend iyathandabuza
Ixabiso le-LTC liqala kwakhona ukunyuka
I-Litecoin yokurhweba kwi-$ 155 ngexesha lokushicilela
Ixabiso langoku: $ 155.50
Intengo yeNtengiso: $ 13,040,191,623
Umthamo wokuThengisa: $ 1,047,887,584
I-Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso nge-21 Disemba 2021
Ixabiso leLitecoin (LTC) ikwisilungiso esisezantsi kodwa ukonyuka kuyathandabuzeka. Ngaphezulu kweeveki ezimbini, i-altcoin ivalelwe phakathi kwe-$ 142 kunye ne-$ 168 amanqanaba exabiso. Abathengi kunye nabathengisi abaphumelelanga ukwaphula amanqanaba oluhlu lwe-cryptocurrency. Umzekelo, ukuba abathengi baphula i-168 yeedola eziphezulu kwaye isantya se-bullish sigciniwe, intengiso iya kuthi ifikelele kwi-220 yeedola. Ngakolunye uhlangothi, ukuba abathengisi baphula ngaphantsi kwenkxaso ye-142 yeedola, imarike iya kuncipha ukuya kwi-$ 126 ephantsi.
I-Litecoin izama ukuphinda iqalise phezulu okubangele ukuba ifikelele kwinqanaba le-41 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Nangona ukunyakaza kwexabiso eliphantsi, i-altcoin ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. I-Litecoin ingaphezulu kwe-48% yoluhlu lwe istochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwisantya esiphezulu. Ukunyuka okuya phezulu kunokujongana nokuchasana kwinqanaba eliphezulu lamva nje.
Iinkunzi ze-Litecoin ziqala ukunyuka phezulu kodwa i-uptrend iyathandabuza. Eyona nto iphambili kukuba ukunyuka okunyukayo komile kumanqanaba aphezulu exabiso. Okwangoku, ngoNovemba 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-LTC liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 153.98.
I-Litecoin (i-LTC) iphinda ihlawule i-$ 140 iNqanaba leXabiso leMbali, i-May Resume Up Up
Ukuhlaziywa: 15 Disemba 2021
Ixabiso le-LTC lidibanisa ngaphezulu kwe-140 yeedola
I-Litecoin ijolise phezulu kwi-240 yeedola
Ixabiso langoku: $ 150.07
Intengo yeNtengiso: $ 12,604,931,840
Umthamo wokuThengisa: $ 1,140,759,567
I-Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso nge-14 Disemba 2021
Ixabiso leLitecoin (LTC) ikwi-downtrend. I-cryptocurrency ngoku iphinda iphinda i-28 Septemba inqanaba lexabiso lembali ye-142 yeedola. Namhlanje, ikhandlela le-bullish libonisa ukunyuka okunyukayo kwe-altcoin. Kwinyathelo lexabiso langaphambili ngoSeptemba, imarike iphinde yanyuka ngaphezu kwenkxaso yangoku ukuze ifikelele kwi-280 yeedola zangaphambili. Nangona kunjalo, ukuba i-Litecoin iphinda ibuyele ngaphezulu kwe-148 yenkxaso, i-bullish ye-bullish iya kwaphula ukuchaswa kokuqala kwi-165 yeedola kunye ne-rally ukuya kwi-200 yeedola. Ikhefu elingaphezu kwe-200 yeedola liya kuqhuba i-cryptocurrency ngaphandle kokulungiswa okuhla.
I-Litecoin ikwinqanaba le-36 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin ikwindawo ye-downtrend ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuhla. I-Litecoin ingaphezulu kwe-25% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Amacandelo estochastiki athambekele ngokuthe tye ngaphezu kwe-25% yendawo yestochastic yemihla ngemihla.
Ixabiso le-Litecoin ngoku lidibanisa ngaphezu kwexabiso lexabiso le-140 yeedola. I-uptrend iya kuqalisa kwakhona ukuba i-altcoin iphinda ibuyele ngaphezu kwenkxaso yangoku. Okwangoku, ngoNovemba 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-LTC liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 153.76.
I-Litecoin (LTC) idibanisa ngaphezu kwe-149 yenkxaso ye-$, ukunyuka kunokwenzeka
Ixabiso le-LTC lidibanisa ngaphezu kwenkxaso ye-149 yeedola
I-Litecoin inokuphinda iqalise i-uptrend
Ixabiso langoku: $ 160.10
Intengo yeNtengiso: $ 13,537,491,004
Umthamo wokuThengisa: $ 1,603,396,160
I-Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso nge-7 Disemba 2021
I-Litecoin's (LTC) Ixabiso likwisilungiso esisezantsi njengoko ixabiso lenza ukunyuka okuzinzileyo ngaphezu kwenkxaso ye-149 yeedola. Iinkunzi ziye zakhusela inkxaso ye-149 yeedola kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo. Akuzange kubekho intshukumo ebalulekileyo yexabiso njengoko i-crypto idibanisa ngaphezu kwenkxaso yangoku. Kwi-upside, ukuba ixabiso le-LTC libuyisela ngaphezu kwenkxaso yangoku, imarike iya kuvuka ukuze iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphule ngaphezu kwe-$ 1.10 yokuchasana. Oku kuya kubangela ukuba i-cryptocurrency iphume kwisilungiso esisezantsi. I-Litecoin iya kuphinda iphakame ngaphezu kwe-$ 220 ephezulu. Okwangoku, i-LTC/USD isaguquguquka ngaphezulu kwenkxaso ye-149 yeedola.
LItecoin (LTC) Ukufunda iiMpawu zezoBugcisa
I-Litecoin ikwinqanaba le-34 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ixabiso le-LTC likwindawo ye-bearish trend and iyakwazi ukuwa phantsi. I-Litecoin ingaphezulu kwe-25% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi iphinde yaqala ukusebenza ngokunyukayo. Imivalo yexabiso ye-Litecoin ingaphantsi komgca weentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ezihambayo ezihambayo, ezibonisa ukuwa okunokwenzeka kwengqekembe.
I-Litecoin ibikwintshukumo esezantsi kodwa ifikelela ekudinweni kwe-bearish. I-altcoin idibanisa ngaphezu kwe-149 yeedola ukwenzela ukunyuka okunokwenzeka. Okwangoku, ngoNovemba 18 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-LTC liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 155.45.
I-Litecoin (LTC) iphinda iqale phezulu kodwa ibambelele ngaphantsi kweedola ezingama-220
Ixabiso le-LTC libuyela ngaphezulu kwe-182 yeedola
I-Litecoin ikwindawo ye-bearish trend
Ixabiso langoku: $ 213.02
Intengo yeNtengiso: $ 17,893,842,428
Umthamo wokuThengisa: $ 2,126,017,148
Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoNovemba 30, 2021
I-Litecoin's (LTC) ixabiso iye intshukumo ezantsi. I-downtrend ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish njengoko i-altcoin ifikelele kwi-189 yeedola ephantsi kwaye ihoxise umva. Ngomhla we-28 kaNovemba, ixabiso le-LTC libuyele ngaphezulu kwe-182 yeedola kodwa lamiswa kwi-220 yeedola. Ixabiso le-LTC laphuka ngaphezu kwe-50-day line ehambayo ephakathi kodwa ihlehliselwe umva ngenxa yokumelana ne-$ 220.
I-Litecoin iphakame kwinqanaba le-48 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Imarike ikwindawo ye-bearish trendy kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Imivalo yexabiso ingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuwa okunokwenzeka. I-Litecoin ikwisantya esiphezulu njengoko ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla.
I-Litecoin ikwinqanaba elihlayo njengoko ixabiso lifikelele kwi-189 yeedola ephantsi Ixabiso le-crypto liphinde laqala ukunyuka. Okwangoku, ngoNovemba 19 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-LTC iya kuwa kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 177.81.
Uhlalutyo lwe-NZDUSD - ixabiso liqhekeza kwinqanaba lenkxaso ye-0.68200 kwimarike yeKiwi
Ixabiso liqhekeza kwinqanaba lenkxaso ye-0.68200 kwimarike yeKiwi. Inkqubo yexabiso le-NZDUSD sele ikwi-downtrend ixesha elide. Inkqubo yentengiso ibekwe ngokuthanda iibhere, kwaye abathengisi beemarike banokugcina iKiwi ikwimeko ehlayo. Ngenxa yokuhla kwexabiso, abathengisi bakwazi ukuqhekeza kwinqanaba elidala lenkxaso ye-0.68200. Oku kwaphuka kwakhuthazwa kukubona kwebhere kunye nokuthengwa kwemarike. Ngenxa yoko, ixabiso lilindeleke ukuba liqhubele phambili ekuthandeni abathengisi de kuphele amandla abo.
Amanqanaba aBalulekileyo eKiwi:
Amanqanaba okumelana: 0.71800, 0.70600
Amanqanaba enkxaso: 0.69309, 0.68200
I-NZDUSD yexesha elide iTrend: Bearish
Ukujonga kwi-orientation jikelele yesakhiwo kwixabiso, kubonwa ukuba ipateni yemarike emva kokuhlanganiswa phakathi kwamanqanaba e-0.70600 kunye ne-0.69300 amanqaku okubaluleka, intshukumo yexabiso yenza ipateni yemarike emise okwe-M njengoko iibhere kunye neenkomo zigcina. ukulwela amandla. Ukunyuka emva kwale pateni kukuqhekeka kwii-0.68200 zamanqaku okubaluleka. Ixabiso lokuqala liye langena kwi-indection kwimarike kunye ne-candlestick ye-Doji ngaphambi kokuba iibhere zingene.
Ngokusekelwe kule nto, iibhere ziya kuthi ekugqibeleni ziqhubele phambili kwicala lazo ngokude nje ukuba isigaba se-bearish singaphelelwanga. Nangona kunjalo, ixabiso lingangqina ukuhoxiswa kwakhona kweli nqanaba ngaphambi kokuba i-downtrend iqhubekele ekukhanyeni kwe-bearish. Ukudibanisa kwe-RSI (i-Relative Strength Index) kunye ne-Stochastic Oscillator ibonisa ixabiso kummandla ogqithisiweyo kwi-chart yosuku lwe-1. Oku kubonisa ukuba i-pullback iya kusondela kwinqanaba elinjalo ngaphambi kokuba iibhere ziphumelele ukuhla.
Imarike ibonisa irali yexabiso ekuhambeni kweNZDUSD. Imakethi iyaqhubeka nokuthanda iibhere njengoko uqhambuko luqhubeka. Iibhere nazo ziqinisekile ukuba ziya ezantsi. I-TSI (Isibonakalisi Samandla Okwenyani) yeemarike ibonisa ukunyakaza kwexabiso njengoko i-downtrend isetyenzisiwe ngabathengisi emva kokuqhawula kwinqanaba elibalulekileyo le-0.68200. Ixabiso lilindeleke ukuba liye ngaphantsi emva kokurhoxiswa kwelo nqanaba.
Qaphela: i-Learn2.trade ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali.
I-Litecoin (i-LTC) Ibambe ngaphezu kwe-$ 200 yenkxaso, iphinda iqalise i-Upside Momentum
Ixabiso le-LTC lifumana inkxaso ngaphezulu kwe-206 yeedola
I-Litecoin iyaguquguquka phakathi kwee-avareji ezihambayo
Ixabiso langoku: $ 213.17
Intengo yeNtengiso: $ 17,978,799,593
Umthamo wokuThengisa: $ 1,895,430,106
Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoNovemba 23, 2021
I-Litecoin's (LTC) ixabiso iye intshukumo ezantsi. Ngomhla we-18 kaNovemba, i-altcoin inqabile ngaphezu kwe-$ 200 kunye nomgca we-50 weentsuku ezihambayo. Ixabiso le-LTC lilungisiwe ukuya phezulu kodwa larhoxiswa kumndilili ohambahambayo weentsuku ezingama-21. Ixabiso le-LTC ngoku livalelwe phakathi kwee-avareji ezihambayo. Ikhefu elingaphantsi kwe-50-day SMA liya kubangela ukuba i-altcoin iwele kwi-$ 140 ephantsi. Ngakolunye uhlangothi, ukuba inkxaso yangoku ibambe, i-Litecoin iya kuvuka ukuvavanya kwakhona umgca weentsuku ze-21 ezihambayo. Isantya esiphezulu siya kuphinda siqalise ukuba ixabiso liphuka ngaphezu kwe-21-day line ezihambayo.
I-Litecoin iwele kwinqanaba le-46 kwixesha le-Relative Strength Index 14. Imarike ikwindawo ye-downtrend kwaye iyakwazi ukuhamba phantsi. Imivalo yexabiso ayikho kwindawo ye-bearish trending okanye kwindawo ye-bullish. Ixabiso le-crypto liphakathi kwee-avareji ezihambayo. I-Litecoin ikwi-bearish momentum njengoko ingaphantsi kwe-55% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla.
I-Litecoin ihamba phantsi njengoko yawela kwinkxaso engaphezulu kwe-206 yeedola. Ixabiso le-crypto lidibanisa ngaphezu kwenkxaso yangoku. Okwangoku, ngoNovemba 22 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-LTC iya kuwa kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 203.74.